Eff प्रभावशाली मोबाइल रूपान्तरण अनुकूलन सल्लाह जसले तपाईंलाई ग्राहकहरु जित्न | Martech Zone
यहाँ ज्ञानको सान्दर्भिक समाचार छ। 52 प्रतिशत ग्लोबल वेब ट्राफिक स्मार्टफोनबाट आउँदछ। मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने व्यक्तिको संख्या आसमान छ। यो जहाँ बहुमत मानिसहरु तपाइँको उत्पादन वा सेवाहरु आविष्कार गर्दछ।
यसमा कुनै शंका छैन।
तर तपाईको व्यवसायको लागि सहज र राम्रो डिजाइन गरिएको वेब वेब समाधान बिना, अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। ई-वाणिज्य व्यवसायमा, उदाहरणका लागि, यो फेला पर्‍यो Consumers 55 प्रतिशत उपभोक्ताहरूले आफ्नो खरीद गरेका थिए जब उनीहरूको मोबाइल फोन मार्फत उत्पादन पत्ता लगाईयो।
नछोड्नुहोस्! यहाँ तपाईको रूपान्तरण दर बढाउन effective प्रभावी मोबाइल अप्टिमाइजेसन सल्लाहहरु छन्।
१. मोबाइल साइट लोड गर्ने गति तपाईंको शीर्ष प्राथमिकता हो
मोबाइल साइटहरूमा आउँदा गतिले फरक पार्दछ।
वास्तबमा, अनुसन्धान शो त्यो websites सेकेन्ड वा छिटो लोड हुने मोबाइल वेबसाइटहरूले कम बिक्रीको तुलनामा उच्च बिक्री उत्पादन गर्न सक्दछन्। इन्टरनेट मूल निवासीहरूले ढिलो लोडिंग गति सहन गर्दैनन्। यो तपाइँको मोबाइल वेबसाइट को लागी एक श्राप मानिन्छ।
भाग्यवस, तपाईं यस समस्या सुधार गर्न धेरै तरिका गर्न सक्नुहुन्छ।
एडअन्स कम गर्नुहोस् तपाईको मोबाईलमा तपाईंको वेबसाइटमा सर्वर अनुरोधहरूको संख्याले यसको वेगलाई ठूलो असर गर्न सक्छ। के तपाइँ बहु ट्र्याकरहरू वा एनालिटिकल उपकरणहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको सफ्टवेयरको भित्रबाट हेर्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईले समस्यालाई त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ।
एक माथीदेखि तलसम्म कहिल्यै नबिर्सनुहोस् निदान। हुनसक्छ केही फाईलहरू तपाईंको प्रणालीमा विनाशकारी छन्। ठूला फाईलहरू जस्तै दृश्य सामग्रीहरू तपाईंको लोड गतिको गतिलाई धीमा पार्न सक्दछन्। त्यसोभए, तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा फाईलहरू कम गर्न चाहानु सक्नुहुन्छ। छविहरू, विज्ञापन-टेक, र फन्ट नम्बर यसमा सामान्य अपराधीहरू हुन्।
जान्नुहोस् सामग्री त्यो प्राथमिकतामा हुनु आवश्यक छ। तपाईंको पृष्ठको शीर्षमा राख्नुहोस्, जुन वेबसाइटमा अन्य तत्त्वको अघि लोड हुनुपर्दछ। यस रणनीतिले तपाईंको लोड गति बढाउन सक्दछ जब साइटको प्रयोगकर्ता अनुभव UX लाई ध्यानमा राख्दै।
२. मोबाइल तयार हुनका लागि उत्तरदायी डिजाइन छनौट गर्नुहोस्
उत्तरदायी मोबाइल डिजाइन सिर्जना गर्न गाह्रो छ। तपाईंले बिभिन्न स्क्रीन आकारहरूमा समायोजन गर्नु पर्छ। तर क्वेस्ट त्यहाँ रोकिदैन। तपाईंले बिभिन्न फोन अभिमुखीकरण र प्लेटफर्मलाई पनि विचार गर्नुपर्नेछ।
तपाई सजिलै नेभिगेसनका लागि बटनमा फोकस गर्न सक्नुहुनेछ। मेनू वा कोटिहरू क्लिक गर्न सजिलो हुनुपर्दछ। प्रत्येक पृष्ठले प्रयोगकर्तालाई कहाँ जाने भनेर स्पष्ट संकेत दिनुपर्दछ जब उनीहरूले केटमा आईटम थप्ने, अनुरोधहरू रद्द गर्ने, वा अर्डरहरू जाँच गर्ने जस्ता केही गर्न चाहानुहुन्छ।
डिजाईनको सजावट लचिलो हुनु पर्छ। यसले स्क्रिप्टिutions क्षमताहरू, छविहरू, र भिडियो आकारहरू रिजोलुसनहरू समायोजन गर्नुपर्दछ। मात्र याद गर्नुहोस्, मोबाइल समाधानहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। अन्तहीन पृष्ठहरू, ठूला पाठहरू, र विस्तृत दृश्य सामग्रीहरू तपाईंको आगन्तुकहरूको लागि कुल टर्न अफहरू छन्।
Mobile. मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूका लागि अनावश्यक पप-अप र भिडियोहरू हटाउनुहोस्
ती डरलाग्दो पप-अप र भिडियो विज्ञापनहरूले तपाईंको समग्र वेब डिजाइनलाई बिगार्न सक्छ, र फलस्वरूप, तपाईंको रूपान्तरण दर पनि।
तपाईंको मोबाइल वेब डिजाईन कत्तिको राम्रो छ, धेरै पप-अपहरू कार्यान्वयन गर्नाले यूएक्स र ग्राहकको सन्तुष्टिमा ठूलो गिरावट आउँदछ, जसले कम रूपान्तरण दर निम्त्याउँछ।
अधिक नेतृत्व सिर्जना गर्नुको सट्टा, तपाईले सायद उच्च बाउन्स रेट र यातायात कम गर्नुभयो। वास्तवमा, द्वारा गरिएको एक अध्ययन अनुसार उत्तम विज्ञापनको लागि गठबन्धन, मोबाइल विज्ञापनको केहि घृणाजनक प्रकारहरू निम्न छन्:
स्वत: खेल्ने भिडियोहरू
एनिमेसनहरू जुन फ्ल्याशिंग राख्छ
खारेज गर्नु अघि काउन्टडाउन हुने विज्ञापनहरू
मोबाइल वेब पृष्ठहरू विज्ञापनको %०% भन्दा बढि रहेको छ
सिमलेस चेकआउट मार्फत यसलाई सजिलो बनाउनुहोस्
चेकआउट परित्याग असामान्य छैन। कारण चेकआउट पृष्ठको खराब डिजाइनमा छ। त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् किन ग्राहकहरूले उत्पादनहरूलाई शपिंग कार्टमा छोड्छन् वास्तवमा तिनीहरूलाई किन्नुभएन। सामान्यतया, तिनीहरू थिच्न सही बटन फेला पार्न सक्दैन, वा पृष्ठ नेभिगेट गर्न एकदम जटिल छ।
त्यसकारण, चेकआउट पृष्ठ सफा र न्यूनतम राख्नु पर्छ। सेतो स्पेस र बहु ​​पृष्ठहरूमा चरणहरू फैलाउन मद्दत गर्दछ। बटनहरूले चेकआउट प्रक्रियाको सही क्रममा ग्राहकलाई फनेल गर्नु पर्छ।
Pay. भुक्तानीका अन्य फारामहरू थप्नुहोस्
चेकआउट चरण भनेको पोइन्ट हो जहाँ तपाईं आगन्तुकहरूलाई वास्तविक ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण, यसलाई सहज लेनदेन र उच्च रूपान्तरणको लागि अनुकूलित गरिनु पर्छ।
यो आशा नगर्नुहोला कि तपाईका सबै ग्राहकहरु तिनीहरुको अर्डर को लागी भुक्तान गर्न PayPal प्रयोग गर्नेछन्।
इ-वाणिज्य व्यवसाय सँधै लचिलोपन मा विचार गर्नुपर्छ। क्रेडिट कार्ड वा बैंक भुक्तानीहरू बाहेक, तपाईं एप्पल पे थप्न चाहानुहुन्छ, र गुगलले तपाईंको वेबसाइटमा भुक्तान च्यानलहरूमा भुक्तान गर्दछ। डिजिटल वालेट बिस्तारै उदय हुँदैछ, जुन इ-कमर्स व्यवसायहरूले भविष्यवाणी गर्नुपर्छ र फाइदा लिनुपर्दछ।
स्मार्टफोनले विश्वमा प्रभुत्व जमाउँदै जाँदा, व्यवसायले अनुकूलन गर्न सिक्नु पर्छ।
मोबाइल च्यानलमा स्टोरमा प्रशस्त अवसरहरू छन्। सबै यसले लिन्छ एक राम्रो डिजाइन र स्थिर अप्टिमाइजेसन हो। तपाईका ग्राहकहरुलाई खुशी राख्नुहोस् तपाईको मोबाईल वेब समाधान मार्फत सबै चीज व्यवस्थित गरी।
तर त्यहाँ चीजहरू गर्ने एउटा उत्तम तरिका पनि छ। तपाइँ पेशेवरहरुबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। मोबाइल अप्टिमाइजेसन कठिन हुन सक्छ, तर वेब डिजाइन डेरीको सहयोगले तपाईं यसलाई सबै चीजसँग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं आफ्नो व्यवसायको अन्य भागहरूमा ध्यान दिन समय बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
टैग: स्वत: खेल्ने भिडियोराम्रो विज्ञापनको लागि गठबन्धनकाउन्टडाउन विज्ञापनहरूमोबाइल रूपान्तरणमोबाइल अनुकूलनमोबाइल पपअपमोबाइल गतिमोबाइल वेबसाइट गतिसिमलेस चेकआउट